ကမ္ဘာကျော်လူသိများ ဟောလီးဝုဒ်မှ လူမျိုးခြားအနုပညာရှင်အတွဲများ - MyStyle Myanmar
ကမ္ဘာကျော်လူသိများ ဟောလီးဝုဒ်မှ လူမျိုးခြားအနုပညာရှင်အတွဲများ
ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်၊ သီဆိုသူတစ်ဦးအနေဖြင့် တေးဂီတနယ်ပယ်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားလာသည့် John Legend သည် ဂရမ်မီဆု (၁၀) ဆုကို လက်ခံရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တေးဂီတဗွီဒီယိုရိုက်ကူးရေးအတွက် နာမည်ကြီးမော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Christine Teigen နှင့်တွေ့ဆုံရင်းမှတဆင့် ဖူးစာဆုံခဲ့ပြီး Simone Stephens အမည်ရှိ သမီးလေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
Kanye West သည် ချီကာဂိုမှ တေးဂီတပညာရှင်၊ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှကျော်ကြားသူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ဘက်စုံကျွမ်းကျင်သူ၏ဘေးတွင် အစဉ်အမြဲနေပေးနေသူကတော့ နာမည်ကြီးဖက်ရှင်မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Kim Kardashian ဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်တွင်တော့ သားသမီးနှစ်ယောက်နှင့်အတူ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသည့် မိသားစုတစ်စုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
TIME မဂ္ဂဇင်းမှ ထုတ်ပြန်ထားသော အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးလူများစာရင်းတွင် တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်သည့် Robert Pattinson သည် တစ်ချိန်က Twigs နာမည်ဖြင့် လူသိများကျော်ကြားခဲ့သည့် အဆိုတော်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ အကသမားတစ်ဦးဖြစ်သည့် Tahliah Debrett Barnett နှင့် ရွှေလက်တွဲခဲ့ပါတယ်။
ငွေရောင်ပိတ်ကြေးမှုံကားပေါ်မှ ၀င်ငွေအများဆုံးမင်းသားများစာရင်းတွင် ပါဝင်သည့် မင်းသား Matt Damon သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Stuck On You ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရင်းဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသော အာဂျင်တီးနားလူမျိုး မင်းသမီး Luciana Barroso နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့၍ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဘ၀တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
Fantastic Four, Dark Angel ဇာတ်လမ်းတွဲများဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများကျော်ကြားနေသည့် မော်ဒယ်တစ်ဖြစ်လဲ မင်းသမီး Jessica Alba သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မင်းသား Cash Warren ဖြင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် သမီးနှစ်ယောက်၏အမေဖြစ်နေပါပြီ။
US actress and guest of honour Halle Berry (R) poses with her fiance, French actor Olivier Martinez, on June 13, 2013 duringaphotocall upon their arrival for the “Toiles enchantees” event, as part of the Champs-Elysees film Festival in Paris. Toiles enchantees isaFrench NGO which aims to show films to children hospitalized for long periods of time. AFP PHOTO / PIERRE ANDRIEU (Photo credit should read PIERRE ANDRIEU/AFP/Getty Images)
တစ်ချိန်ကမော်ဒယ်ဖြစ်ဖူးခဲ့သည့် အကယ်ဒမီဆုပိုင်ရှင် မင်းသမီး Halle Berry သည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်၏ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသမီးများထဲတွင် တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် S.W.A.T ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရေးတွင် ပြင်သစ်လူမျိုးဖြစ်သည့် မင်းသား Olivier Martinez ဖြင့် ဖူးစာဆုံခဲ့ရာမှ ယနေ့အချိန်အထိ လက်တွဲမြဲလျက်ရှိပါတယ်။
MyStyle Myanmar2017-11-28T15:31:00+06:30November 28th, 2017|Stars & Style|